स्वास्थ्य » Home
योग-"योग शारीरिक स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक रहेको मान्यता समाजमा भए पनि यसले मानसिक स्वास्थ्यमा समेत बल पुर्‍याउँछ। अमेरिकाको इलिनोइस विश्व विद्यालयमा हठ योगमा गरिएको ११ वटा अनुसन्धानको अध्ययन पछि के देखियो भने, योग गर्नेहरुको मानसिक स्वास्थ्य र स्मरणशक्ति राम्रो हुन्छ।" "तीन दशकअघिसम्म नेपालमा मधुमेह,.....
विश्वको हरेक संस्कृति र समाजमा कपाल सुन्दरताको प्रतिक मानिन्छ । कालो, लामो र बाक्लो कपाल साँचै अति सुन्दर देखिन्छ। साथै सुन्दर कपाल मानिस स्वस्थ हुनुको पर्यायवाची पनि मान्न सकिन्छ। हुनत कपाल झर्दैमा वा पातलो हुँदैमा मानिस अस्वस्थ हुन्छ भन्न खोजिएको होइन । तर, सुन्दर र आकर्षक कपाल हुने मानिसलाई सामान्यतया.....
“अमलाको” यस्तो प्रयोगले पत्थरी हुनबाट जोगाउछ !
एजेन्सी -अमलामा भिटामिन सी प्रसस्त पाइन्छ । अमला त्रिफलाको ३ औषधिमध्ये एक गुणी जडिबुटीमा पर्छ । भिटामिनको राम्रो स्रोत भएकै कारण अमलालाई हिन्दु धर्ममा पनि पुजनीय फलको रुपमा राखिन्छ । भनिन्छ ३ वटा सुन्तलामा भन्दा १ वटा अमलामा धेरै भिटामिन हुन्छ र अमलाको रुखको फेदको छायाँमा बसेर खानाले मात्रै पनि अनेक रोगहरु.....
समयमा नै सचेत बनौ ! चुरोट तथा सुर्तिजन्य पदार्थको सेवनले कसरी फोक्सोमा असर गर्छ ?
आज विश्व धूमपान रहित दिवस। हरेक वर्ष विश्वर ३१ मे का दिन विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमका साथ यो दिवस मनाइन्छ। यो वर्ष दिवसका लागि ‘सुर्ती र फोक्सो स्वास्थ्य’ भन्ने नारा रहेको छ। यो नाराले सुर्तीजन्य पदार्थले कसरी फोक्सोमा हानि गर्छ र यसले अरु विभिन्न केके रोगहरु निमत्याउँछ भन्ने कुरामा केन्द्रित रहेको.....
गाजरको फाईदै फाईदा, मुटुरोग तथा क्यान्सरबाट समेत बच्न सकिने !
गाजरको फाईदै फाईदा, मुटुरोग तथा क्यान्सरबाट समेत बाच्न सकिने ! काठमाडौं -गाजर जमीनमुनि रहेको जरा रूपान्तरित भई केही मोटो हुने वनस्पति हो । यसको जरा खाद्यपदार्थको रूपमा प्रयोग गरिन्छ । गाजरका विभिन्न फाइदाहरु छन् । बैज्ञानिकहरुले गाजर खानामा समावेश गर्दा मटुरोग तथा क्यान्सरबाट बच्न सकिने यसअघि नै पुष्टि.....
उमेर नै नपुगी किन झर्छ कपाल, यस्ता छन् १२ कारणहरु
हिजोआज कपाल झर्ने समस्याले धेरै मानिस तनावमा पर्ने गरेका छन् । धेरै ब्यक्तिहरु कपाल झर्ने समस्याबाट हैरान भएको पाइन्छ । धेरैको गुनासो हुन्छ, मेरो उमेर नै पुगेकै छैन कपाल झरेर केही बाँकी छैन । आखिर किन झर्छ कपाल ? यस्ता छन कारणहरु १. शारीरिक तनाव शल्यक्रिया गरेको अवस्था, दुर्घटना, गम्भीर बिरामी अथवा सामान्य.....
यस्ता छन् , “काक्रो”का १५ रोचक तथ्य र आश्चर्यजनक फाईदा
पानीको मात्रा ९६ प्रतिशत हुन्छ, मानिसकाे शरीरमा पानी आपूर्ति गर्न काँक्रो सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ। – सूर्यको किरणद्वारा उत्पन्न हुने समस्याका लागि काँक्रो लाभदायी हुन्छ । यसको बोक्रामा नै म्याग्नेसियम, पोटासियम र सिलिकनजस्ता तत्व हुन्छन् । यहीकारण यसलाई स्पा उपचारका लागि प्रयोग गरिन्छ। –.....
दन्तमन्जन कोलगेटमा क्यास्सर बिकास गर्ने हानिकारक रसायन भिटियो
स्वास्थ्यको लागि हानिकारक मानिने रसायन भेटिएको अनुसन्धानले देखाएको छ । कोलगेटमा क्यान्सर विकासमा सहयोग गर्ने ‘त्रिक्लोसा’ भेटिएको हो । त्रिलोक्साले गरेको एक अध्यायनमा यस्तो तथ्य फेला परेको हो । यो समाचार टेक्सीकोलोजी जर्नलले जनाएको छ । त्रिक्लोसाको उच्च प्रयोगले क्यान्सरको कोष विकास गर्ने अध्ययनले.....
बर्डफ्लु लागेर नेपालमा पहिलोपटक एकजना युवकको मृत्यु
बर्डफ्लु अर्थात इन्फ्लुएन्जा ए (एच फाइभ एन वान) लागेर नेपालमा पहिलोपटक एकजना युवकको मृत्यु भएको छ । काभ्रेका २१ वर्षीय एक युवकको १५ चैतमा मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । १० चैतमा ज्वरो र खोकीको उपचारका लागि अस्पताल भर्ना भएका उनलाई चिकित्सकले इन्फ्लुएन्जाको औषधि दिएका थिए । उनको स्वासप्रश्वाससम्बन्धी.....
किन देखिन्छ डरलाग्दो सपना हेर्नुहोस
स्वस्थखबर पत्रीका-मानिसहरू सपना देख्छन्, कहिले राम्रो र कहिले नराम्रो अर्थात् डरलाग्दो। डरलाग्दो सपना देखेपछि मानिस पसिना–पसिना भएर ब्युँझन्छन् पनि। तर, त्यस्ता डरलाग्दा अथवा नराम्रो सपना बिरामी हुने संकेत पनि हुन सक्ने वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्.। कहिलेकाहीँ नराम्रा सपना रोगको लक्षण देखिनुभन्दा धेरै.....